SwiftChat nwere ike inyere gị aka iji nkata ndụ mata ndị ọbịa dị mma ngwa ngwa wee duru ha gaa na ịzụrụ ihe. Mkparịta ụka dị ndụ na ecommerce nwere ike bụrụ 400% dị ọnụ ala karịa nkwado ekwentị, nwere ike ịbawanye ntụgharị 3 ruo ugboro 5, belata ọnụego mgbahapụ ụgbọ ala, mụbaa afọ ojuju ndị ahịa, bulie iguzosi ike n'ihe ndị ahịa, ma melite arụpụta ndị ọrụ nkwado gị.
Jun 24, 2021 na 4:57 nke ụtụtụ
Social media ecommerce ahịa bụ ngwá ọrụ dị ike nke ukwuu. Ọ na-enye gị ohere ka gị na ụlọ ọrụ, ndị ahịa, na ahịa gị kparịta ụka n'ụzọ nkeonwe, ọha. Ị nwere ike iji mgbasa ozi ọha na eze mepụta njikọ aka & mmekọrịta, kwalite okporo ụzọ na ebe nrụọrụ weebụ gị, na ịzụlite nnukwu ntọala nke ndị ahịa. Ịnọgide na-enwe ụda siri ike & àgwà nke ụlọ ọrụ gị site na mgbasa ozi mgbasa ozi dị ezigbo mkpa n'ihi na nkwụsi ike bụ ihe ga-eme ka ntụkwasị obi n'ime ndị na-ege gị ntị.